Waze na-agbakwunye "Tough Crosses" na mpaghara na Los Angeles | Gam akporosis
Waze bụ nnukwu netwọkụ mmekọrịta yana ọrụ iji mara ụzọ kachasị mma ga-akpọga gị ebe ị na-aga. N'ihi obodo ya nke na-enye nzaghachi ya n'oge, anyị nwere ike ịmara ma ọ bụrụ na okporo ụzọ ahụ ga-adaba na kilomita 10 ka anyị wee nwee ike ịhọrọ ihe ọzọ. A Waze nke Google nwere ma na-ahapụ njirimara ohuru dị ka ụbọchị abụọ gara aga.
Waze maara na ọ bụghị ebe niile na -aga ka ha bụ otu. Onwere ndị ga-echere ka oge anyị gabiga ha, ebe enwere ndị ọzọ chọrọ itinye uche na nlebara anya anyị niile kpata nnukwu nsogbu oge obula anyi ruru ha. Nke a bụ ihe na - eme ndị bi na Los Angeles na ọ bụ maka nke a ka ọrụ a bidoro mmelite iji zere ihe a na - akpọ "Crosses mgbagwoju anya."
Ihe njirimara a na - enweta bụ iwelata "ịkpọtụrụ" ya na ụdị ụzọ a gbagwojuru anya ka anyị wee nwee ike izere ha n'oge ụfọdụ ka anyị achọghị itinye uche anyị niile ka anyị wee pụọ n'ụzọ ahụ n'ụzọ amara. Ebumnobi bụ belata ike ọgwụgwụ na wiil maka ọkwọ ụgbọ ala na na ụzọ ụfọdụ ma ọ bụ njem nwere ike ịba uru.
Waze arụkọ ọrụ ọnụ yana onye nchịkọta akụkọ map Los Angeles yana ndị ọrụ obodo sitere na mmemme ụmụ amaala jikọtara ọnụ iji chọpụta mpaghara nsogbu kachasị. Ha nwedịrị ike ịchọta azịza ndị ọzọ maka redirect ndị ọkwọ ụgbọala nke ụzọ ndị ahụ.
O doro anya na ịgbanwe ụzọ ọkwọ ụgbọ ala nwere ike ebute oge na nkeji, mana oge ụfọdụ ọ ka mma karịa ịghara irighiri akwara gị site na ịpịgharị ụgbọ ala ọ bụla na-abịa n'ihu anyị. N'ọnọdụ ọ bụla, enwere ike inwe nkwarụ a maka ndị ọrụ nọ na Los Angeles, ebe ọ bụ na ọ na-arụ ọrụ maka ha na ndabara.
Echiche bụ ịgbatị atụmatụ a na obodo ndị ọzọ gburugburu ụwa ma ọ ga-adabere na obodo Waze mata ha ma kpee ya ikpe. Mmelite nke rutere na mpaghara dịka ọ dị ngosi nke kacha ọsọ kwere.
Waze - GPS, Maps, Ihe ngosi okporo ụzọ na Nsorouzọ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Waze na-agbakwunye "Obe Ojuju"; n'oge naanị na Los Angeles
Egwuregwu vidio 3 ọhụrụ ekwuputara na E3 2016 ilezi anya